RUUXI RAAYA MA RAAGO - Geerida Sheekh C/raxmaan Sheekh Muxyadiin Celi oo xanuujisay reer Sweden - Caasimada Online
Home Maqaalo RUUXI RAAYA MA RAAGO – Geerida Sheekh C/raxmaan Sheekh Muxyadiin Celi oo...
Waa hal-ku-dheg laga soo guuriyay xikmadaha ay Somaliidu caanka ku tahay. Oraahda waxay asalkeedu ahayd NINKI ROONI MA RAAGO, taas oo erayga NIN loola jeedo lab iyo dhedig, sida ku xusan xataa Qur’aanka kariimka ah.
Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxyadiin Celi wuxuu ahaa ruux aad u qiima badan oo buuxiyay shuruudaha qofka wanaagsan. Haddaba, oraahda nin rooni ma raago micnaheedu ma ahan cimrigiisi aa soo gaabtay, balse waxaa laga yaabaa inuu ka tegay dunida iyadoo weli bulshadu u baahan tahay oo tebeysa hogaankiisa.
Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu ahaa ruux aqoon badan oo adeegsan jiray xikmado xambaarsan degganaan iyo dulqaad isagoo si gaar ah u adeegsan jiray maadada Cilmi Nafsiga uu aad ugu dadaali jiray wax bandanna ka bartay. Wuxuu ahaa faahim garan kara qofka hadlaaya xikmadda u qarsan. Kana falceli jiray iyadoon dadku badi aysan garan.
Intaas waxaa u dheeraa inuu Ilaahey ugu deqay wax la yiaahdo “leadership quality” oo ah hogaanka bulshada oo ay cid waliba raalli ka tahay…waana arrin aad u adag si loo helo qof si dhab ah u buuxin kasrta booski uu baneeyay.
Axmad Calasow – Waxaad kala xiriiri kartaa dr.alasso83@gmail.com